किन हुन्छ भक्भकाउने समस्या ? यसको उपचार के ? - Jhapa Online
किन हुन्छ भक्भकाउने समस्या ? यसको उपचार के ?
बोल्दा अक्मकिने, शब्द सही उच्चारण गर्न नसक्ने वा रोकिइ रोकिइ बोल्ने बानीलाई भक्भकाउनु भनिन्छ । यो समस्या कतिपयमा उमेरको वृद्धिसंगै समाधान हुन्छ भने कतिपयमा जीवनभर रहिरहन्छ । वयस्क उमेरमा पनि भकभकाउने मानिसहरु कतिपय अवस्थामा हाँसो मजाकका पात्र पनि बन्छन् । कहिलेकाँही सामान्य मानिसहरु पनि तनाव, घबराहट, डिप्रेसन, आवेगलगायतका कारण भकभकाउँछन् । तर, त्यो क्षणिकमात्र हुन्छ, त्यो कुनै समस्या होइन।
के हुन्छ भकभकाउँदा ?
गर्मीमा यसो गरौँ